Imagazini YOKWENZA - IGeofumadas
Ikhaya/GPS / Izixhobo/UMSEBENZI WAMAGAMA
Eli ligama lomagazini we-digital opapashwe yiinkampani zenkampani ye-Yurophu yaseSokkia kunye neTopcom, esekelwe eNetherlands.
Ehlelwe ngesiDatshi nangesiNgesi kanyekanye, ngesiqubulo esithi "Umagazini wokubeka isikhundla kwiingcali", Umxholo wayo uhamba ngaphezu kwekhathalogu elula yemveliso yezobugcisa kwaye ifaka amanqaku wesicelo enomdla kakhulu kubafundi bezo zifundo.
Iinkampani ezininzi sele ziyisebenzisa le fomathi yemagazini zineziphumo ezilungileyo, njengoko besitsho. Ukuqala, ndiyithandile ifomathi elula ngaphandle kwe iconography entsonkothileyo.
Uyilo alunakulinganiswa, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo, ngamanqanaba amathathu okusondeza. Eyokuqala, ngenxa yamaphepha amabini akuvumela ukuba uhambe ngokukhawuleza, ucofa uvumela iphepha nangona kweli nqanaba kusenokwenzeka ukuba ungafundi okuninzi kodwa ngokuvala ipaneli yasekhohlo unendlela yesithathu esele yenza umxholo ufundeke esweni ubungakanani obuqhelekileyo.
Kodwa oku ngamampunge, umxholo wayo wangaphakathi ubalulekile, okokuqala kubasebenzisi abanyanisekileyo okanye abanokubakho beTopcom kunye neSokkia brand, emva koko kubasebenzisi ngokubanzi bezihloko ze-geofumed kwicandelo lokufakwa kolwazi lomhlaba. Makhe sibone umbono okhawulezileyo wezihloko ezinomdla:
Kule candelo kukho imbono yokuqala kwezixhobo ezintsha; Nangona iweleka kwiincwadana, akukubi ukulandelela ubuchwepheshe obunethemba lokuba ndiza kubona elizayo: - Umqokeleli we-Sokkia SHC25A
-Umlawuli weTopcom The FC-25A
- Isoftware ye-ScanMaster 2.0
-I-IP-S2 HD Imaphu eselfowuni
-Umamkeli we-GNSS GR-5
Imephu yeMephu, ikusasa lezolimo.
Inqaku likaSander Jongeleen lisikhumbuza kwaye liqinisekisa kwakhona ukuba ukusetyenziswa kweetekhnoloji zokubamba ezihambahambayo akuselilo ikamva kodwa ngoku kukuphonononga. Ekudluliseni, izinzwa kunye neendlela ezisetyenziselwa ukukhangela intsimi kunye nokusebenza kweofisi kubonisiwe.
I-Touchdown e-Antarctica. Iingqapheli zabavandlakanyi banamathele kubaphenyi kwiimeko ezinzima.
Ukuphucula i-GIS DATA
Ulwaphulo-mthetho. Akumangalisi ngoku ngokubona ukuhlaziywa kwedatha ngenjongo zophando lobugebengu.
Ukulungiswa kweNqwelo-moya yeZweinbrucken
Eyona nto ingcono, uya khona kwaye uyibone ngentshiseko.
Ewe, andazi. Ndivakalelwa kukuba yikhophi yokuqala.
Yingakho ndinike idilesi ethile yalo msebenzi wokushicilela.
Molo, umbuzo: kuya kwenziwa njani ukufikelela amanani alandelayo online, ingaba isiza onlinebrochure.vanas.nl isicelo wegama eligqithisiweyo kodwa akukho ifom yokungenela data phi?
Okanye ngaba ufanele ube ngumthengi we-TOPCON ukulifunda?